warkii.com » Erdogan oo sheegay in Turkiga ay kamid noqon doonaan 4ta dowladood ee ugu sareyso dhanka warshadeynta diyaaradaha Droneska.
Erdogan oo sheegay in Turkiga ay kamid noqon doonaan 4ta dowladood ee ugu sareyso dhanka warshadeynta diyaaradaha Droneska.
Madaxweynaha Turkiga, Recep Tayyip Erdogan, ayaa sheegay in waddankiisu uu ka mid noqon doono afarta waddan ee adduunka ugu horreeya ee soo saarista diyaaradaha aan duuliyaha lahayn.
Erdogan ayaa wareysi uu siiyay majaladda maxliga ah ee “Crater” ayaa sheegay in soo saarista diyaaradaha aan duuliyaha laheyn kuwa hubeysan iyo kuwa aan hubeysneynba ay ka mid yihiin mashaariicda ugu muhiimsan ee warshadaha difaaca Turkiga.
Wuxuu intaas ku daray: “lahaanshaheena diyaaradaha aan duuliyaha laheyn ee Panjoni waxay naga dhigeysaa kuwa ka mid noqon doona afarta waddan ee adduunka ugu horreeya.”
Erdogan ayaa wuxuu carrabka ku adkeeyay Diyaaradaha dagaalka Drones-ka ah ee Turkiga in ay door weyn ka qaataan la dagaallanka argagixisada, waxayna sidoo door firfircoon ka ciyaarayaan dagaalada Suuriya iyo Liibiya.
Sidoo kale wuxuu tilmaamay inay jiraan baahi weyn oo dibada ah oo loo qabo diyaaradaha Turkiga ayadoo ay jiraan dano caalami ah ay ka leeyihiin dowladaha caalamka warshadaha hubka ee Turkey.
Erdogan wuxuu kaloo tilmaamey kororka mashaariicda warshadaha difaaca Turkiga kuwaasoo markii hore ahaa 62 balse haatan kor u kacay ilaa 700, xili sidoo kale ay kor u kacday miisaaniyadooda difaaca 11 jibaar tan iyo 2002dii ayadoona haatan gaartay $60 billion.
Intaas waxaa sii dheer sare u kicida hubka ay iibiyaan oo markii hore ahaa $248 milyan, balse haatan noqotay in kabadan $3 bilyan sanadkii 2019ka.
Ugu dambeyn Erdogan ayaa sheegay in 5 shirkadood oo kamid ah shirkadahooda ay kamid yihiin shirkadaha ugu fiican aduunka ee farsameeya hubka taasoona uu ku tilmaamay guul iyaga usoo hoyatay.
Warshadaha difaaca Turkiga ayaa mudooyinkaan dambe dardar xoogan ku socday ayagoona soo saarayay noocyada kala duwan ee hubka, Maraakiibta dagaalka, Gaadiidka dagaalka iyo diyaaradaha dagaalka kuwa duuliye la’aanta iyo kuwa kalaba, waxayna haatan soo saaraan in kabadan 70% hubka ay Turkiga adeegsadaan ayadoona dhawaan lagu wado inuusan Turkiga wax hub ah uga baahan dibadda taas badalkeena ayaga loosoo doonto.